Google ayaa ku dhawaaqday xirmo kontaroolo dheeri ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha qaybteeda wax soo saarka, Google Workspace (neé G Suite), ee Yurub – kaas oo ay soo saarayso dhamaadka sanadkan iyo kan xiga.
Waxay sheegtay in kantarooladan dheeriga ah ay awood u siin doonto ururada – labada qaybood ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay – inay “xakameeyaan, xaddidaan, oo ay la socdaan wareejinta xogta iyo ka imanaya Midowga Yurub laga bilaabo dhammaadka 2022”, iyaga oo ku dhawaaqaya awoodaha soo socda ee boostada blog.
Tallaabadan ayaa u muuqata mid loogu talagalay in looga jawaabo khatarta sare ee xagga sharciga ah ee ku saabsan dhoofinta xogta shaqsiyeed – ka dib go’aankii sharci ee EU-da bishii Luulyo 2020 – kaas oo khatar gelinaya hoos u dhigista isticmaalka gobolka ee adeegyada daruuraha Mareykanka.
Horraantii sanadkan, tiro ka mid ah wakaaladaha ilaalinta xogta ayaa bilaabay tallaabo dhaqangelin oo isku dubaridan oo diiradda lagu saarayay hay’adaha dawladda ee isticmaalka adeegyada daruuraha – iyada oo ujeedadu tahay in la baaro haddii tallaabooyin ilaalin xog ku filan la isticmaalo, oo ay ku jirto marka xogta laga dhoofiyo kooxda. Iyo Guddiga Ilaalinta Xogta Yurub (EDPB), oo hawsha hagaya, waa inay daabacaan warbixinta ‘xaaladda ciyaarta’ ka hor dhammaadka 2022 – oo ku habboon Google-ka waqtigeeda si loo soo saaro (qaar ka mid ah) kontaroolada cusub.
Waxa kale oo jiray, bilihii la soo dhaafay, go’aamo ay gaadheen wakaaladaha ilaalinta xogta oo helaya isticmaalka qaar ka mid ah agabka sida Google Analytics in aanay ku haboonayn sharciyada sirta ah ee kooxda.
Google wuxuu tixraacayaa awoodaha dheeraadka ah ee soo galaya isticmaalayaasha Yurub waxay heli doonaan sida “Sovereign Controls for Google Goobta shaqada” – waxa kale oo u eg dhawaaq miyir leh oo fikradda ah in sharci-dejiyeyaasha EU ay jecel yihiin inay tixraacaan “madax banaanida dhijitaalka ah”.
Sharci-dajiyayaasha EU-da waxay jumladaas u adeegsadaan inay ka hadlaan gobolka oo kasbanaya madax-bannaanida kaabayaasha dhijitaalka ah – kuwaas oo intooda badan ay bixiyaan shirkadaha tignoolajiyada ee Mareykanka. Laakiin, halkan, Google wuxuu u muuqdaa inuu isku dayayo inuu beddelo nooc kale oo ah ‘madaxbanaanida’ isagoo soo jeedinaya in tillaabooyinka farsamada iyo qaabeynta isticmaale kaliya ay siin karaan madax-bannaani ku filan Midowga Yurub, iyadoon loo eegin tignoolajiyada lafteeda oo ay wali bixiso shirkad Mareykan ah, gudaha Waxaan rajeyneynaa in macaamiisha ku jira kooxda ay sii wadaan iibsashada qalabkooda.
“Ururada yurubiyanku waxay hawlahooda iyo xogtooda u dhaqaajinayaan daruuraha iyagoo kordhinaya tirada si ay awood ugu yeeshaan iskaashiga, u kaxeeyaan qiimaha ganacsiga, iyo u gudubka shaqada isku-dhafka ah. Si kastaba ha ahaatee, xalalka daruuriga ah ee xoojinaya awoodahaas xoogga badan waa inay buuxiyaan shuruudaha muhiimka ah ee ururka ee amniga, sirta, iyo madax-banaanida dhijitaalka ah. Waxaan inta badan ka maqalnaa siyaasad-dejiyeyaasha Midowga Yurub iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga in hubinta madaxbannaanida xogta daruurtooda, iyada oo loo marayo gobolaynta iyo kontaroolada gelitaanka maamulka, ayaa muhiim u ah muuqaalkan isbeddelaya,” ayay ku qortay barta blog-ka.
“Maanta, waxaan ku dhawaaqaynaa Xakamaynta Daran ee Google Workspace, kaas oo waxay siin doontaa awoodaha dhijitaalka ah ee hay’adaha, labadaba kuwa dawliga ah iyo qaybta gaarka loo leeyahay, si ay u xakameeyaan, u xaddidaan, oo ay ula socdaan wareejinta xogta iyo ka soo celinta Midowga Yurub laga bilaabo dhammaadka 2022, iyada oo awoodo dheeraad ah la bixiyo 2023 oo dhan. Ballanqaadkani waxa uu dhisayaa sirta-dhinaca macmiilka ee jira, gobollada xogta, iyo awoodaha Koontaroolada Helitaanka.”
Waa maxay awoodaha dheeraadka ah ee Google hadda ku dhawaaqay? Muddada dhow, waxa ay u muuqataa inay jirto balaadhinta sirta-dhinaca macmiilka taasoo Google ku dhawaaqday Workspace xagaagii hore.
“Hay’aduhu waxay dooran karaan inay isticmaalaan sirta-dhinaca macmiilka si baahsan dhammaan isticmaaleyaashooda, ama waxay abuuraan sharciyo khuseeya isticmaalayaasha gaarka ah, unugyada ururka, ama wadayaasha la wadaago,” ayuu yidhi Google. “Sirta-dhinaca macmiilka ayaa hadda guud ahaan diyaar u ah Google Drive, Docs, Sheets, iyo Slides, iyada oo la qorsheynayo in lagu kordhiyo shaqeynta Gmail, Google Calendar, iyo Meet dhamaadka 2022.”
Google waxa kale oo ay ku dhawaaqaysaa balaadhinta kontaroolada xogta goobta – in kasta oo wakhtigeeda kor u qaadida awoodan uu yahay mid gaabis ah, oo loo qorsheeyay inuu yimaado “dhamaadka 2023”.
“Gobolada xogtu waxay mar hore u oggolaadeen macaamiisheena inay xakameeyaan goobta lagu kaydiyo xogtooda la daboolay markay nasanayaan,” ayay qortay, iyadoo raacisay: “Waxaan kor u qaadi doonaa awooddan dhamaadka 2023 iyada oo la ballaarinayo daboolida kaydinta xogta iyo ka baaraandegidda gobolka oo ay weheliso koobi dalka gudihiisa ah.”
Waxa kale oo jiri doona galaangal badan – si loo daboolo waxa Google-ku-dhigo sida “kordhinta xakamaynta heerarka madaxbannaanida dhijitaalka ah”.
Waxay sheegtay in kontaroolada gelitaanka ee imanaya ay u suurtagelin doonto macaamiisha:
Xakamee iyo/ama oggolow gelitaanka taageerada Google iyada oo loo marayo Oggolaanshaha Helitaanka;
Xaddid taageerada macaamiisha shaqaalaha taageerada ku salaysan EU iyada oo loo marayo Maareynta Helitaanka;
Hubi taageerada habeen iyo maalin ee shaqaalaha Google Engineering, marka loo baahdo, oo leh kaabayaal miis ah oo fog;
Abuur warbixinno qoraal ah “dhameystiran” oo ku saabsan gelitaanka xogta iyo ficillada iyada oo loo marayo hawsha Daah-furnaanta Helitaanka.
Laakiin, mar labaad, kontarooladan dheeriga ah ma imanayaan ilaa dhamaadka 2023.
Google meel eben kama soo bilaabin – isagoo raadraaca soo galaya “kontaroolada madaxbanaanida xogta” isticmaalayaasha EU dayrtii hore, markii ay sidoo kale ka hadashay bixinta adeegyada daruuraha “shuruudaha Yurub.
In kasta oo ay, dabcan, u ahaan doonto maamulayaasha kooxdu inay qiimeeyaan in waxa ay bixiyaan ay buuxinayaan heerka sharciga ee loo baahan yahay ee xogta u qulqulaysa su’aasha, er, si sharci ah.
Google guud ahaan waxa ay ku dooddaa in shaqada isku-dhafka ahi ay adkaynayso shuruuda sharci ee ah in lagu hayo xakamaynta xogta meel kasta oo ay degan tahay – ka hor inta aan la soo jeedin habkeeda, ee “cloud-native architecture” (waxa ay qeexaysaa in Google Workspace “si buuxda ugu dhex shaqeeyo browserka, iyada oo aan u baahnayn khasnado ama kaydin). software lagu rakibay aaladaha shaqaalaha”) oo ay weheliso hab-aqoonsanaan (“eber-aamin”) habka amniga kaas oo ka shaqeeya geofencing isticmaalayaasha iyo aaladaha, oo lagu daray kontaroolada maamulayaasha si loogu ogolaado inay dejiyaan xuduudaha wadaaga oo ay qeexaan xeerarka xukuma isgaarsiinta isticmaalaha, ka caawi macaamiisheeda inay maraan kuwan biyaha sharciga ah ee jeexan iyadoo weli u oggolaanaysa software-ku hawlihiisa wada shaqayneed ee asaasiga ah inay shaqeeyaan.
Isticmaalka EU-da adeegyada daruuriga ah ee shirkadaha fadhigoodu yahay Mareykanka ayaa lagu dahaadhay hubanti la’aan sharci muddo dhowr sano ah – ugu dambeysay tan iyo Luulyo 2020 markii maxkamadda sare ee ururka ay dishay calanka EU-US Privacy Shield xogta wareejinta xogta ee isku dhac dilaa ah. Inta u dhaxaysa sharciga ilaalinta Maraykanka iyo xuquuqda gaarka ah ee Midowga Yurub.
Afartii sano ee ay taagnayd, Qarninimada Shield waxay u fududaysay EU-da xogta Maraykanka dhoofinta nidaamka is-shahaadaynta si loogu oggolaado dhoofinta xogta shakhsiyeed ee reer Yurub. Laakiin nidaamkaas wuxuu ku dhamaaday shaqo joojintii bishii Luulyo 2020 ee CJEU.
Inkastoo maxkamaddu aysan mamnuucin dhoofinta xogta oo dhan, waxay kicisay kakanaanta isticmaalka hababka kale ee wareejinta (sida qodobbada qandaraasyada caadiga ah) – taasoo caddaynaysa in wakaaladaha ilaalinta xogta gobolka ay waajib ku tahay inay soo galaan oo ay joojiyaan wareejinta xogta haddii ay sameeyaan. rumayso in macluumaadka reer Yurub ay ku qulqulayaan meel ay halis ugu jirto. (EDPB waxay soo saartay hagitaan waxa loogu yeero ‘tallaabooyin dheeri ah’ kuwaas oo gacan ka geysan kara kor u qaadida heerka ilaalinta, sida sirta adag.)
Xaqiiqda ah gaashaanka Qarsoonnimada ee EU-US ee ay ku dhufatay CJEU ayaa si cad u muujisay in Maraykanku uu yahay meel halis u ah xogta EU – sidaa darteed adeegyada daruuraha ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa ku jiray qaab-dhismeedka ilaa iyo markaas.
Iyadoo xukunka maxkamada aan isla markiiba la raacin amarrada lagu joojinayo socodka xogta, hay’adaha EU waxay xoojiyeen ficilada iyo fulinta arrinta wareejinta xogta bilihii la soo dhaafay. Kormeeraha Ilaalinta Xogta Yurub wuxuu siiyay baarlamaanka Yurub biloowgii sanadkan hoos u dhac ku yimid degelka buukinta COVID-19 (kaas oo isticmaalay Google Analytics oo uu ku jiray koodka Stripe), tusaale ahaan.
Go’aannada kale ee xiga ee ka imanaya kormeerayaasha xogta ayaa si isku mid ah u qaatay arrin ku saabsan adeegsiga aaladaha Google-ka qaarkood.
Xukunka CJEU wuxuu daba socday 2013kii Snowden oo uu si cad u sheegay NSA Edward Snowden – oo daabacay faahfaahinta barnaamijyada ilaalada ballaaran ee dawladda Mareykanka ee dhageysanaya adeegyada dhijitaalka ah – muujinta taas oo sidoo kale horseeday heshiiskii hore ee EU-US xogta wareejinta ee, Safe Harbor, in lagu dhufto 2015 by caqabad sharci hore.
Marka, halka Midowga Yurub iyo Maraykanku ay ku dhawaaqeen inay gaadheen heshiis siyaasadeed oo ku saabsan beddelka Shield Qarsoodi ah bishan Maarso, isku daygii saddexaad ee lagu soo afjarayo isla qayilaadda sharci ayaa shaki la’aan wajihi doonta loolan cusub oo maxkamadeed. Iyo nasiibdarrada ah in Shield Qarsoodi ah 2.0 uu ka badbaado qiimeynta CJEU waxay u egtahay mid caato ah, oo ku guuldareysatay dib-u-habeyn la taaban karo oo sharciga ilaalinta Mareykanka (kaas oo aan u muuqan inuu miiska saaran yahay).
Dhammaan kuwaas oo ka dhigaya istaraatijiyad Google – oo ah bixinta macaamiisheeda EU-da xirmo ballaarin ah oo farsamo iyo tallaabooyin urureed (sida sirta-dhinaca macmiilka, meelaynta xogta iyo kontaroolada kale ee kontaroolada sida taageerada farsamada ee EU-ku salaysan) – u eg iskuday macquul ah hel hab lagu sugo iyo xaqiijinta mustaqbalka xogta ganacsiga muhiimka ah ee ku qulqulaya indhaha xeeriyeyaasha EU, iyada oo aan loo eegin heshiis kasta oo siyaasadeed oo warqad ah. (Inkasta oo barta blog-ka ay sidoo kale xuseyso in Google Cloud uu noqon doono “samaynta ilaalinta” oo ay bixiso xogta cusub ee EU-da ee la heli karo “mar haddii la hirgeliyo qaab-dhismeedka” (dhacdo wali waxay u badan tahay inay ka harsan tahay dhowr bilood).
“Waxaa naga go’an inaan ku qalabeyno macaamiisheena ku sugan Yurub iyo adduunka oo dhan xalal farsamo oo awood leh oo ka caawinaya inay la qabsadaan, oo ay sii joogaan, muuqaal sharciyeed si degdeg ah u kobcaya. Waxaanu u qaabaynay oo aanu u dhisnay Google Workspace si ay ugu shaqeyso aasaas sugan, anagoo siinayna awoodaha lagu ilaalinayo isticmaalayaashayada, xogtooda iyo xogtooda mid gaar ah. Madaxbanaanida dhijitaalka ah ayaa udub dhexaad u ah howlgalkayada socda ee Yurub iyo meelo kale, iyo mabda’a hagaya ee macaamiishu ku tiirsanaan karaan hadda iyo mustaqbalka,” Google ayaa ku daray.
Isagoo ka hadlaya ku dhawaaqista shirkadda weyn ee tignoolajiyada, Dr Lukasz OlejnikCilmi-baare madax-bannaan oo amniga internetka ah iyo la-taliye ku salaysan Yurub, wuxuu qeexayaa horumarkii ugu dambeeyay “horumar xiiso leh oo badeecad iyo adeeg ah” kaas oo uu ku qiimeeyay sida hubaal ah oo ay dhiirigelisay sharciga iyo siyaasadda EU.
“Waxay u muuqataa inay si toos ah u taageerto talooyinka EDPB, taas oo sidoo kale ka tarjumaysa aniga falanqayn hore. Gaar ahaan taageerada adeegsiga farsamo gaar ah iyo habayn urureed,” ayuu soo jeediyay. Dhanka farsamada, habaynta waa in lagu taageeraa sirta-dhinaca macmiilka, siyaabaha aan furayaashu waligood uga tagin dhismaha shirkad EU ku taal. Awood sireed dhinaca macmiilka waa ay horay u bixisay Workspace. Maanta, wali waxaa loo arki karaa inay tahay xoogaa dhib badan – mana cadda haddii kantaroolada cusub ay wax fududayn doonaan. Aan rajayno. Weli, waxa ay u muuqataa in waxa cusubi uu yahay kan-koontaroolka-hal-ku-jirka ah.
“Balaadhinta xarumaha xogta gudaha waa horumar la filayo laakiin mid dheeraad ah oo taageeri doona xukunka ECJ,” ayuu sidoo kale noo sheegay, isagoo ku daray: “Waxa maqan waa sahlan tahay in la isticmaalo oo la isticmaalo maareynta helitaanka xogta. Sida xogta Google Docs Tusaale ahaan, maanta way ka fog tahay mid fudud in si fudud loo qoro dhammaan dukumeentiyada la wadaago, si meesha looga saaro habaynta wadaagga. Si aad dadka uga filayso inay sameeyaan faylka-ka-daba-faylka, ee galalka gaarka ah, waa ka fog in la isticmaalo marka la eego cabbirka. Tan waa in la fududeeyaa, ee maaha in lagu saleeyo fayl gaar ah. Waxay u muuqataa in – laga yaabee! – Awoodda cusub ee Xakamaynta Helitaanka ayaa laga yaabaa inay halkan ku caawiso? Sida ay u shaqeyso si dhab ah ayaa la arki doonaa.”